ဘောလုံးပွဲကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေကို ဘာလို့ရည်းစားအဖြစ်ရွေးသင့်တာလဲ | Duwun
ကောင်မလေးက ဘောလုံးပွဲအကြောင်းအသံတောင်မကြားချင်ဘူးလို့ ရာဇသံပေးထားလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ ကောင်လေးတွေရှိလား?
ကိုယ်အားပေးတဲ့အသင်း အနိုင်ရချိန်မှာ မျှဝေခံစားချင်ပေမယ့် ကောင်မလေးက ဘောလုံးပွဲအကြောင်း နားမလည်လို့ စိတ်ညစ်ရတဲ့ကောင်လေးတွေရောရှိလား? ဒီလိုဆိုရင်တော့ ဘောလုံးပွဲအကြောင်းနားလည်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားသူတွေဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင် ကံကောင်းလိုက်မလဲနော်။ ကောင်မလေးတွေ ဘောလုံးပွဲအကြောင်းကို နားလည်ပြီး ကြိုက်လာပြီဆိုရင်တော့ ပြန်ရမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေက မနည်းဘူးနော်။
ဘောလုံးက တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် ဘုံဘာသာစကားတစ်ခုဆိုတာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက လက်ခံနေကြပါပြီ။ ဒီလိုပါပဲ သင်နဲ့သင့်ကောင်မလေးအကြားမှာလည်း ဘောလုံးက ဘုံဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
နေမာ၊ ဆွာရက်ဇ်၊ စတီဗင်ဂျာရတ်၊ ဂျွန်တယ်ရီ ဒီလိုနာမည်တွေကြားရင် ကောင်မလေးအများစုက ဘောလုံးသမားဆိုတာသိဖို့ဝေးလို့ ဂရိနတ်ဘုရားတွေရဲ့နာမည်တွေလို့တောင် ထင်ကောင်းထင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံးပွဲပရိသတ်ကောင်မလေးဆိုရင်တော့ မင်းမသိတဲ့ ဘောလုံးသမားတွေနာမည်ကိုတောင်သိနေနိုင်ပြီး မင်းတို့နှစ်ယောက်အကြားမှာ တူညီတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုရှိနေမယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။
မနေ့ညက ဘောလုံးပွဲကြည့်ထားပြီး ဂါနေတဲ့ရုပ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုလာတွေ့မယ့် ရည်းစားကို မိန်းကလေးအများစုကတော့ မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်လုံး ပူညံပူညံလုပ်နေမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်လိုပဲ ဘောဝါသနာရှင်ကောင်မလေးဆိုရင်တော့ ဒါက ပြဿနာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူလည်း မနေ့ညက ဘောလုံးပွဲကြည့်ထားပြီး အတူတူဂါနေတာမို့ပါ။
အားပေးတဲ့ ဘောလုံးအသင်းတူတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့နှောင်ကြိုးလောက် ခိုင်မြဲတဲ့အရာမရှိဘူးနော်။ မယုံမရှိနဲ့ တစ်ချိန်လုံး အသင်းအကြောင်းဆွေးနွေးနေပြီး အသင်းပွဲစဉ်တိုင်းကို အတူတူအားပေးရတဲ့ အရသာကို အားပေးတဲ့အသင်းတူညီတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတိုင်းသိကြပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ အားပေးတဲ့ အသင်းမတူရင်တော့ နည်းနည်းပြဿနာရှိနိုင်တယ်နော်။
သာမန်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ မင်းသာ ဘောလုံးအင်္ကျီတစ်ထည်အတွက် ငွေသုံးလာတဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်လိုမှ နားလည်လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဝါသနာတူမိန်းကလေးဆိုရင်တော့ ဘောလုံးအတွက် အတူဈေးဝယ်ထွက်နိုင်သလို သူကိုယ်တိုင်တောင် ရွေးချယ်ပေးတာ လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးအထိ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ဆောင်ပုဒ်ပါ။ ညဉ့်နက်ပိုင်းဘောလုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲရဲ့ပျော်ရွှင်မှု၊ ဝမ်းနည်းမှု၊ ဒေါသထွက်မှုစတဲ့ ခံစားချက်တွေကို မျှဝေဖို့အတွက် ဘယ်သူ့ကို တမ်းတနေမှာလဲ။ ကိုယ်နဲ့အတူဘောလုံးပွဲကြည့်ပြီး လိုက်ခံစားပေးမယ့် ရည်းစားက အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဘယ်တော့မှ မင်းတစ်ယောက်တည်းမဖြစ်စေရဘူးလေ။
ညက ပွဲကြီးပွဲကောင်းကြည့်ပြီး မနက်ခင်းမှာ Good Morning လို့ မက်ဆေ့ချ်မပို့နိုင်တဲ့ ကိုယ့်ရည်းစားကို ဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးက နားလည်ပေးနိုင်ပါ့မလဲ။ ညက ဘာတွေများလုပ်နေသလဲဆိုတဲ့ အတွေးဖိစီးပြီး မနာလိုဝန်တိုစိတ်အထိဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘောပွဲကြိုက်သူချင်းအတွက်ကတော့ အေးဆေးပါ။ Good Afternoon ဆိုပြီး သူကတောင် အရင် မက်ဆေ့ချ်ပို့နိုင်ပါသေးတယ်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေလိုရက်မျိုးမှာ ကိုယ့်ကောင်မလေးက Shopping ထွက်မယ်၊ ဘားသွားမယ်စတဲ့ ပလန်တွေဆွဲနေချိန်မှာ ကိုယ်က ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ မန်ယူ-လီဗာပူးလ်ပွဲကို လက်မလွှတ်ချင်ဘူးဆိုရင် အဲ့ကိစ္စက တကယ့်ကို ကွိုင်တက်သွားစေမယ်နော်။
ဘောလုံးပွဲအတူတူကြည့်မယ်သူဆိုရင်တော့ ဒီလို လမ်းများတော့ပဲ ညပွဲအတွက် အတူတူပြင်ဆင်ရင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းလို့ရမှာပါ။
ကိုယ်အားပေးတဲ့အသင်းကစားမယ့်ညမှာ အနိုင်/အရှုံးရလဒ်အပေါ်အစိုးရိမ်လွန်ပြီး ဒါက ကစားပွဲတစ်ပွဲပါပဲဆိုပြီး ဖြေတွေးနေရချိန်က ဘောလုံးပွဲဝါသနာရှင်တွေအတွက် တကယ့်ကို စိတ်ဖိစီးရပါတယ်။ ဒီခံစားချက်ကို သာမန်မိန်းကလေးတစ်ဦးအနေနဲ့ ဘယ်လိုနားလည်နိုင်မှာလဲ။ မျှော်လင့်မထားတဲ့ ပြဿနာမျိုးတောင်ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်ကို အပြည့်အဝနားလည်ပြီး အတူကျော်ဖြတ်ပေးနိုင်မယ့်သူကတော့ ဝါသနာရှင်ကောင်မလေးတွေပါပဲ။
ကဲ ဒီတော့ ဘာကြောင့် ဘောလုံးပွဲကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေကို ရည်းစားအဖြစ်ရွေးသင့်လဲဆိုတာကို သိသွားပြီထင်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကိုယ့်ကောင်မလေးက ဘောလုံးပွဲဝါသနာမပါဘူးဆိုရင်လည်း စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ ကိုယ်နဲ့အတူဘောလုံးပွဲကြည့်တတ်လာအောင်သင်ဖို့က မင်းတာဝန်နော်။ သူတို့တွေ ဘောလုံးပွဲကြိုက်တတ်လာပြီဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပျော်ရွှင်ရဆုံးစုံတွဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတော့ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲ။